ပါတီမိတ်ဆက် | Myanmar Herald Tribune
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင် နိုင်ငံရေးပါတီများမိတ်ဆက်
ဒေါင်းအိုးဝေကဲ့သို့ တွန်စေ ကစေသော်။
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးစေရန် အလေးပေးဆောင်ရွက်မည့် တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင် ခွင့်ပိုရရန်၊ အခွင့်အရေးရရန် ဆောင်ရွက်မည်။
ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ လာရောက်လုပ်ကိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ လိုအပ်သည့်ဥပဒေ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ ပြင်ဆင်ပေးမည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြေယာ၊ လုပ်သားပေါများမှုကို အသုံးပြု၍ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတိုးတက်လာအောင် ဆောင်ရွက်မည်။
အနောက်နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကိုလည်း လျော့နည်းလာအောင်၊ ပပျောက်အောင် စည်းရုံးတောင်းဆိုမည်။
အမှတ်-၆၊ ကွက်သစ်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ရေကျော်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
-တောင်ငူခရိုင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂအလုပ် အမှုဆောင်။
-ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် တောင်ငူခရိုင်အသင်း အတွင်းရေးမှူး။
-ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဒီမိုကရက်တစ် ကျောင်းသားအဖွဲ့ အလုပ်အမှုဆောင်။
– ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၊ အလုပ်အမှုဆောင်။
– ဖဆပလလူငယ်အဖွဲ့ချုပ်၊ အလုပ်အမှုဆောင်။
-ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီပါတီ၊ ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင်။
– ပြည်ချစ်လူငယ်တပ်ပေါင်းစု၊ ဥက္ကဋ္ဌ။
– ပြည်ချစ်အသံ၊ အသံလွှင့်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်။
-ပြည်သူ့ပြည်ချစ်ပါတီ၊ အထွေထွေအတွင်း ရေးမှူး။
– ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ် (ဖ.ဆ.ပ.လ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ) ဦးကျော်ငြိမ်း၏ ကိုယ်ရေးအတွင်းဝန်။
– ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကာလ၌ ဒီမိုကရေစီပါတီ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရာတွင် တစ်ဦး အပါအ၀င်ဖြစ်ပြီး ထိုပါတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့။
– ဦးနုခေါင်းဆောင်သော ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းသည့်အခါတွင်လည်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်နှင့် စည်းရုံးရေးအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့။
– ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီး၌ ဒီမိုကရေစီပါတီမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ရာကျော် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် ခေါင်းဆောင်ခဲ့သည်။ ကိုယ်တိုင်လည်း တာမွေမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်။
မိဘ – ဦးနု-ဒေါ်မြရီ
မွေးသက္ကရာဇ် – ၃၁-၁၀-၁၉၄၇
– ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ မိဘများနှင့်အတူ ရှေးဦးစွာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာ၊ ယင်းမှ ထိုင်းနိုင်ငံ စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး လုပ်ငန်းတွင် အသံလွှင့်ဌာန၌ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်။ (ပြည်ချစ် အသံလွှင့်ဌာန)
– ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ် သြဂုတ်မှ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အထိ အိန္ဒိယအစိုးရ အသံလွှင့်ဌာန All INDIA RADIO (AIR) ဘာသာပြန်၊ အသံလွှင့်အမှုထမ်း (၁၉၉၀ပြည့်နှစ်လယ်)တွင် ဘာသာပြန်ခွင့် ပြုသော်လည်း အသံလွှင့်ပိတ်ပင်ခံရသည်)
– အိန္ဒိယနိုင်ငံနေရာအနှံ့ (အထူးသဖြင့် ဒေလီမြို့တော်၊ ဘုံဘေ (ယခုမွန်ဘိုင်း)၊ ကာလကတ္တားမြို့များ)တွင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေ တင်ပြသည့် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ စီစဉ်ကျင်းပ။
– ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ။
ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (၁)
မိဘ – ဦးကျော်ငြိမ်း-ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ရီ
မွေးသက္ကရာဇ် – ၁၅၊ ၁၂၊ ၁၉၄၇
– တိုင်းပြည်အရေး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကို ၁၉၈၈ ခုနှစ် အရေးအခင်းမှစ၍ ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့။
– ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးစီး၍ဖွဲ့ခဲ့သော (ဖ.ဆ.ပ.လ) (ဖက်ဆစ် ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့)ကို ပြန်လည် အသက်သွင်းရန် ဖ.ဆ.ပ.လ(ဗဟို) အဖွဲ့ချုပ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့။
ဒေါ်နေရီဗဆွေ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (၂)
အဘအမည် – ဦးဗဆွေ
– ၁၉၇၄ ဦးသန့်အရေးအခင်းတွင် ပါဝင်
– ၁၉၇၅ အထွေထွေသပိတ်ကြီးတွင် ရွှေတိဂုံဘုရားရင်ပြင်ပေါ်၌ အဖမ်းခံပြီးအလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ငါးနှစ်ကျခံခဲ့။
– ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် လှည့်လည် ချီတက် လှုပ်ရှားခဲ့။
– ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဖ.ဆ.ပ.လ(မူလ) ပါတီအနေဖြင့် စမ်းချောင်းမြို့နယ်၌ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့။
လူထုအတွက် အပြောင်းအလဲ၊ အပြောင်းအလဲအတွက်လူထု၊
လူထုကောင်းစားရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်ရေး
ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီပါတီသည် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ပီပြင်သည့်ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်ရေးအတွက် အောက်ပါအတိုင်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
– ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်ခွင့်ရရှိရေး၊
– နိုင်ငံရေးအင်အားစုများကို လွတ်လပ်စွာစည်းရုံးလှုပ်ရှားခွင့်ပြုရေး၊
– လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသည့်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ရေး
– ရွေးကောက်ပွဲကြွေးကြော်သံဖြစ်သည့် လူထုကောင်းစားရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အပြောင်းအလဲတို့အတွက် ပြည်သူလူထုအားမဏ္ဍိုင်ပြု၍ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် …
– စားဝတ်နေရေးဟူသောအရေးသုံးပါးတွင် ပြည်သူလူထုအနေနှင့် လူချင်းတူတူ၊ သူချင်းမျှမျှနေနိုင်ရေး၊
– လယ်လုပ်သူလယ်ယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိရေးနှင့် လွတ်လပ်စွာစိုက်ပျိုးရောင်းချခွင့်ရှိရေး၊
– လူတိုင်းအလုပ်အကိုင်ရရှိရေးနှင့် အလုပ်သမားများ၏ ရပိုင်ခွင့်များကို အကာအကွယ်ပေးရေး၊
– ငွေ ၁၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့်စနစ်ထူထောင်ပေးရေး၊
– အခြေခံပညာအထက်တန်းအထိ ]အခမဲ့} ပညာသင်ကြားခွင့်ရရေး၊
– မြို့တိုင်း၊ ရွာတိုင်းလျှပ်စစ်မီးရရှိရေးနှင့် သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိရေး၊
– ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကိုအဆုံးသတ်ရေး၊
– တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားများကိုမြှင့်တင်၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရေး
– နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ပညာရေးစသည့် နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ခေတ်နှင့်အညီ
– ပီပြင်သောအရပ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တစ်ရပ် ဖော်ဆောင်ရေး၊
– အမှတ် (၂၃၄)၊ ပထမထပ် (ယာ)၊ ကျိုက္ကဆံလမ်း၊ ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ တာမွေ။ ဖုန်း-၅၅၇၀၈၇
ဦးရွှေအုံး နာယကနှင့် သဘာပတိ (၁) (ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့)
– ၁၉၂၃ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင်ဖွားမြင်၊
– ၁၉၃၉-၄၀ တွင် စတင်၍ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်ပညာဆည်းပူးခဲ့၊
– ၁၉၃၆ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသပိတ်တွင်ပါဝင်ခဲ့၊
– ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ရှမ်းပြည်ကျောင်းသားများအသင်း) ၏ တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်းတာဝန်ယူခဲ့၊
– ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် အာရှလူငယ်အဖွဲ့၏ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းခရိုင် စည်းရုံးရေးတာဝန်ခံအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့၊
– ၁၉၄၆ ခုနှစ် ပထမ ပင်လုံညီလာခံနှင့် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဒုတိယပင်လုံ ညီလာခံတို့သို့တက်ရောက်ခဲ့၊
– ရှမ်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်တွင် ဘဏ္ဍာရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီး ရှမ်းပြည်လွှတ်တော်တွင် အမတ်တစ်ဦးအဖြစ် ရွေးကောက်ခံခဲ့ရ၊
– ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပဒေသရာဇ်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွင် ဒဏ်ရာရသဖြင့် ဆေးရုံတက်ကုသခံခဲ့ရ၊
– ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် ပုဒ်မ (၅) ဖြင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းခံရ၊
– ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ရှမ်းပြည်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (ရ.တ.ဒ.ဖ) ကို တည်ထောင်ပြီး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့၊
– ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်အဖွဲ့ကို ဦးဌေးနှင့်အတူ ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့။
ဦးဖြိုးမင်းသိန်း (ဥက္ကဋ္ဌ) (ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့)
– ၁၉၆၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင်ဖွားမြင်၊
– ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ဗိုလ်တထောင်နယ်မြေ) ၌ တက်ရောက်ပညာဆည်းပူးခဲ့၊
– ၁၉၈၈ ခုနှစ် ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်၊
– သန်လျင်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွင် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့၊
-၁၉၈၉ ခုနှစ် ဟံသာဝတီခရိုင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွင် ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့၊
-သန်လျင်မြို့ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ စတင်ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့၊
-၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ် (အောက်မြန်မာပြည်)တွင် အတွင်းရေးမှူးတာဝန်ယူခဲ့၊
-လူထုဒီမိုကရေစီပါတီကို ဦးသိန်းတင်အောင်တို့နှင့်အတူ ဦးဆောင် ဖွဲ့စည်းခဲ့၊
-(၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေးပွဲ) ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့၊
ဦးဌေး (ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ-၁) (ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့)
– ၁၉၅၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင်ဖွားမြင်၊
– ၁၉၆၈ ခုနှစ်မှစ၍ မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တို့တွင် ပညာဆည်းပူးခဲ့၊
– ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ဒေးဒရဲမြို့နယ် ရှေ့နေအသင်းတွင် အတွင်းရေးမှူး အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့၊
– ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒေးဒရဲသပိတ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်သပိတ်ကော်မတီတွင် ၆၂ ကျောင်းသားဟောင်းများ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်လည်းကောင်းပါဝင်ခဲ့၊
– ၁၉၈၈ မှ ၁၉၉၀ ခုနှစ်အထိ ဒီငြိမ်းအဖွဲ့ချုပ် လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီနှင့်ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားများ ဒီမိုကရေစီပါတီတို့တွင် တာဝန်ယူခဲ့၊
– ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် အထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီး ထောင်ဒဏ်ခုနစ်နှစ်ကျခံခဲ့ရ၊
– အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် တတိယအင်အားစုအတွက် စည်းရုံးဆောင်ရွက်ခဲ့၊ ပြည်ထောင်စု
ဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်အဖွဲ့ကို ဦးရွှေအုံးနှင့် ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့၊
ဦးသိန်းဌေး (ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ-၂) (ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့)
– ၁၉၆၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင်ဖွားမြင်ခဲ့၊
– အ.ထ.က (၃) ပဲခူးတွင် အခြေခံပညာအထက်တန်းအထိသင်ယူခဲ့၊
– ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်(ပင်မ) တွင် တက်ရောက်ပညာဆည်းပူးခဲ့၊
– ၁၉၈၈ခုနှစ် အရေးအခင်း ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့၊
– ၁၉၉၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် သေဘောဘိုးနယ်မြေသို့သွားရောက်ပြီး ABSDF ဖွဲ့စည်းရာတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဗ.က.သ ကိုယ်စားလှယ်ငါးဦးတွင် တစ်ဦးအပါအ၀င်အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့၊
– ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ကျောင်းသားညီညွတ်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ကော်မတီကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရာ၌ ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့၊
– (၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေးပွဲ) ကျင်းပရာတွင်ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့၊
ဦးသိန်းတင်အောင် (အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး) (ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့)
– ၁၉၆၈ ခုနှစ် မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ဖွားမြင်၊
– ၁၉၈၄ ခုနှစ်မှစ၍ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (လှိုင်နယ်မြေ)တွင် တက်ရောက် ပညာဆည်းပူးခဲ့၊
– ၁၉၈၈ ခုနှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများလှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး လေးလခန့် ထိန်းသိမ်းခြင်းခံရ၊
– ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် သေဘောဘိုးစခန်းသို့ထွက်ခွာ၍ နိုင်ငံရေးဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့၊
– (၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေးပွဲ) ကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တစ်ဦးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့၊
– လူထုဒီမိုကရေစီပါတီကို ဦးဖြိုးမင်းသိန်းတို့နှင့်အတူ ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့၊
(P.D.P-Peace & Diversity Party)
မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ အလံ
မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ အမှတ်တံဆိပ်
– မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီကို စနစ်တကျလေ့လာ
ထားသော ကန့်ကွက်မဲတစ်မဲကို မလေ့လာ၊ မစူးစမ်း၊ မဆင်ခြင်သော
ထောက်ခံမဲ ၁၀၀ နှင့် မလဲနိုင်။
– ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် တရားဥပဒေတို့ကို သမမျှတ
စွာ ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသားတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဖူလုံရေး
တို့ကို နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်အဖြစ် ခံယူသည်။
– ကျွန်ုပ်တို့၏ပါတီဝင်များသည် တရားဝင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်
ခံရသော ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ မဟုတ်ကြစေကာမူ ပြည်သူ
အချက်အလက်များကို လက်ရှိမူဝါဒ ရေးဆွဲသူများ၊ အကောင်အထည်
– လက်ရှိအချိန်တွင် သင့်တော်ရာဥပဒေပြုလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်း
မည့် ဥပဒေမူကြမ်း ၅၂ ချက်ကို ရေးဆွဲထားသည်။
– ၂/၂/၂၃၂၊ မဟော်ဂနီလမ်း၊ ထောက်ကြန့်တိုးချဲ့၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ ဖုန်း-၀၉-၈၆၁၀၇၁၉
– နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ ၁၉၆၁
– ၁၉၈၈ အရေးအခင်းတွင် တစ်ရက် ပါဝင်လှုပ်ရှား
– ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကြို ကာလတွင် ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ် ကာလတစ်လျှောက် လူငယ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်လုပ်ခဲ့။
– မေလ ၁ ရက်၊ ၁၉၇၂
– ၁၉၈၈ အရေးအခင်းတွင် အလုံမြို့နယ် အ.က.သ တွင်ပါဝင်၊
– ပြည်ထောင်စုလူငယ်ကျောင်းသားများ ပေါင်းစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ရုံးခွဲမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့၊
– ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် တ.က.သ တည်ထောင်ရာတွင်ပါဝင်၊
– ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် ၀ိုင်အမ်ဘီအေ၌ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဆန့်ကျင်ရေးအမျိုးသား လှုပ်ရှားမှုလုပ်ဆောင်ရာတွင်ပါဝင်၊
– ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်ရေးအမျိုးသားလှုပ်ရှားမှု တွင်ပါဝင်၊
– ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် တစ်သီးပုဂ္ဂလလွှတ်တော်အမတ် ကွန်ရက်ကို တည်ဆောက်ခဲ့၊
– လက်ရှိတွင် မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ၌ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ-၂ အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်။
– ဇွန်လ ၂၂ ရက်၊ ၁၉၇၂
– ဘိုကလေးမြို့နယ်အတွင်း နိုင်ငံရေးနိုးကြားမှုဖြစ်လာခဲ့ပြီး ဇူလိုင်လတွင် အောင်စင်္ကြာဘုရား တာဝတိံသာ စောင်းတန်းတွင် ပထမဆုံး တရားပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့။ ကိုအောင်တေဇ၊ ကိုရဲဝင်း၊ မိုးဦး၊ ကိုသိန်းမင်း စသော တက္ကသိုလ်ကျောင်း သားများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ၈-၈-၁၉၈၈ အထိ လျှို့ဝှက်လှုပ်ရှားခဲ့။
– ၁၉၉၈ တွင် ကျောင်းပြီး မြန်မာ့လေကြောင်းတွင် အလုပ်ဝင်။ (နိုင်ငံရေးလောကနှင့် အမြဲထိစပ်)၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလ ၁၉ ရက်နေ့ တွင် အလုပ်ထွက်၍ တရားဝင်နိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့။ ဦးရွှေအုန်းနှင့် လက်တွဲ၍ (ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်အဖွဲ့) ကို ၀ိုင်းဝန်းထူထောင်လှုပ်ရှား။
– ၂၀၁၀ မတ်လ ၁၃ မှစ၍မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီစာမူ ကို ရေးသားဖြန့်ဝေ၍ ပါတီကို စတင်တည်ထောင်ကာ လက်ရှိ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတာဝန်ယူ။
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ (တ .စ .ည)
– ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး ကိုယ်စားပြုယှဉ်ပြိုင်မည့်ပါတီ။
– ကျွန်ုပ်တို့ပါတီသည် နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားမှန်သမျှကို ထာဝစဉ် သယ်ပိုးဆောင်ရွက်မည်။ နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူ တို့၏အကျိုးနှင့် ပါတီအကျိုးတို့ ယှဉ်လာလျှင် ပါတီ၏အကျိုးစီးပွားကို စွန့်လွှတ်၍ နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုသာ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မည်ဟု ခံယူသည်။
– တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေး
– ဒီမိုကရေစီအခြေခံ အုတ်မြစ်ခိုင်မာစွာ တည်ဆောက်ရေး
– စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရန် ဆိုရှယ်မားကက် Economy နဲ့သွားရန်၊ (လူမှုသဟဇာတမျှတစေသည့် ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်)
– အမှတ် ၂၄၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၅၅၇၄၈၀၊ ၅၅၇၄၅၉၊ ၅၅၇၄၅၆
– မေ ၁ ရက်နေ့၊ ၁၉၂၆
– ဗမာ့ကာကွယ်ရေး (BDA) တပ် မတော်သို့ ၀င်ရောက်စစ်မှုထမ်း၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ (တ .စ .ည)
– စစ်တက္ကသိုလ် ဗိုလ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃) တက်ရောက်၊
– ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကာလတွင် ဒုတိယဗိုလ်အဆင့်ဖြင့် တိုင်း (၁)၊ တပ်ရင်း (၁၀၆)တွင် တော်လှန်ရေးပြီးဆုံးသည်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်၊
– လွတ်လပ်ရေးရသည်အထိ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်ခဲ့၊
– ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဗိုလ်သင်တန်းတက်ပြီး တပ်မတော်တွင် တပ်ရင်းမှူး၊ ဒုတိယတိုင်းမှူး၊ တပ်မမှူး၊ တိုင်းမှူး၊ စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူး၊ ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်၊ ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဆင့် အထိ တာဝန်ယူခဲ့ပြီး ၁၉၈၅ ခုနှစ်အထိ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်၊
– (မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ)တွင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်အဖြစ် ၁၉၈၈ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင် (နိုင်ငံရေးကောင်စီဝင်)၊
– တ.စ.ညပါတီတွင် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့၊
– လွတ်မြောက်ရေးမော်ကွန်းဝင် (ဒုတိယအဆင့်)၊ လွတ်လပ်ရေး စည်းရုံးရေးတံဆိပ်၊ လွတ်မြောက်ရေးတံဆိပ်၊ စစ်မှုထမ်းကောင်းတံ ဆိပ်နှင့် နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည်ပထမအဆင့်တို့ ချီးမြှင့်ခံထားရ။
– ဧပြီ ၁၂ ရက်နေ့၊ ၁၉၂၆ ခုနှစ်
– နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးကျောင်းသား သမဂ္ဂနှင့် သံမဏိတပ်တွင်ပါဝင်ခဲ့၊
– ၁၉၃၉ ကျောင်းသားသပိတ်တွင် ပါဝင်၊ BDA (ဗမာ့ကာကွယ်ရေး တပ်မတော်)တွင် ပါဝင်ခဲ့ကာ မင်္ဂလာဒုံစစ်တက္ကသိုလ်(ပထမပတ်) တက်ရောက်ခဲ့၊
– ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးတွင် သရက်ခရိုင်၊ သာယာဝတီခရိုင်တို့တွင် တာဝန်ယူ၊
– တပ်မတော် ဗိုလ်သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂) တက်ရောက်၊
– တပ်မတော်တွင် တပ်စုမှူး၊ တပ်ရင်းမှူး၊ တပ်ခွဲမှူး၊ စစ်ဦးစီးမှူး (ပထမတန်း)၊ တပ်မမှူး၊ တိုင်းမှူးတာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခဲ့ကာ ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်အထိ တာဝန်ယူခဲ့၊
– နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းတွင် အတွင်းဝန်၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး၊ ၀န်ကြီး (သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန)၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်တာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခဲ့၊
– မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီတွင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်၊
– တ.စ.ည (တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ)တွင် ပထမတွဲဖက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့၊
– စစ်ဆင်ရေးပြီး စစ်ဆင်ရေး စာအုပ်ဖြင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ် အမျိုးသား စာပေဆုရရှိ၊
– လွတ်လပ်ရေးမော်ကွန်းဝင် (ပထမအဆင့်)၊ အရေးတော်ပုံ တံဆိပ်၊ လွတ်လပ်ရေးစည်းရုံးရေးတံဆိပ်၊ နိုင်ငံတော်စစ်မှုထမ်း တံဆိပ်၊ လွတ်မြောက်ရေးတံဆိပ်၊ ပြည်သူ့စစ်ပွဲတံဆိပ်၊ ပြည်ပရန်နှိမ်တံဆိပ်၊ စစ်မှုထမ်းကောင်း တံဆိပ်၊ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည် (ပထမ အဆင့်)တို့ ရရှိခဲ့။
– မေ ၁၈ ရက်နေ့၊ ၁၉၃၁
– နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးကာလ ၁၉၄၆ ကျောင်းသားသပိတ်တွင် မြို့နယ်ခေါင်းဆောင်၊
– ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် တပ်မတော် (လေ)ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ၊
– ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန စစ်ဦးစီးမှူးတာဝန် (ဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့်)၊
– ပြည်သူ့စစ်ညွှန်ကြားရေးမှူး တာဝန်၊
– ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန၀န်ကြီး၊
– မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီတွင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်၊
– ဇေယျကျော်ထင်ဘွဲ့၊ စစ်မှုထမ်း
3 responses to “ပါတီမိတ်ဆက်”
ဒီလိုရေးထားတဲ့ စာတွေကို ဖတ်ရတော့ သဘောကျတယ်ဗျာ။ နောက်ကိုလည်း ဒါမျိုးတွေ များများရေးပေးပါ။
နှလုံးသားက လာ တဲ့ စကားသံရယ်ပါ
မေ့လို့ဗျာ . . .
စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဘာဖြစ်လာနိုင်သလဲ ? ကျွန်တော် အရမ်းသိချင်နေမိပါတယ်။ ယခုလက်ရှိ နအဖ စစ်အစိုးရ ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို တစ်နိုင်သားလုံးက သိရှိ ပြီးသားပါ